Luca's Farmhouse in Maremma - I-Airbnb
Seggiano, Tuscany, i-Italy
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Luca
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Luca izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Luca's House itholakala e-Monte Amiata, indawo ejabulisayo enomlando wasendulo. Sikumasipala waseSeggiano a Pescina. Indlu yasepulazini iyisakhiwo sabalimi sasendulo esaqala ngekhulu le-19, esakhiwe ngamatshe ngokuphelele futhi sibukeka njengedolobhana elincane. Izungezwe ngokuphelele uhlaza, iyindawo ekahle yokuthi ukwazi ukuzivuselela futhi uzithole, ungene emifuleni nasezindaweni zokugeza ezishisayo, wenze i-Yoga futhi ujabulele ukuphila.
Isakhiwo sasendulo sabalimi esaqala ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye, esakhiwe ngamatshe ngokuphelele futhi savuselelwa sishiya izici zezakhiwo zendawo ziqinile, sakha idolobhana elincane elinamafulethi amane, enemibhede eyi-14-20, ene-sauna, i-whirlpool, eshisayo. ubhavu kanye nedamu lokubhukuda elincane. Ukuqashwa kwesikhathi eside nakho kuyatholakala. I-Petra iyindawo yalesi simemezelo, ibonakala ezithombeni. Bangu
amakamelo okulala amabili, igumbi lokuphumula elikhulu elineziko, igumbi lokugezela elilodwa, ikhishi; ilungele abantu abangu-4 kanye nezingane. IPetra ingabuye ixhumeke nefulethi likaFonte, linamagumbi okulala amathathu (elilodwa elinesitezi), amagumbi okugeza amabili, indawo yokuhlala eyodwa kanye nekhishi elilodwa Amanye amafulethi yiCiliegio kanye neBrezza. Kukhona ukuxhumana kwe-WiFi ngaphakathi kwendlu nasengadini. Izilwane ezincane neziphakathi zamukelekile. Ipulazi litholakala kumakhilomitha ambalwa ukusuka ezindaweni zokugeza ezishisayo zase-S. Filippo, e-Bagni Vignoni, kanti ezinye ezimbalwa zingafinyelelwa ezindaweni zokugeza ezishisayo zasePetriolo, Saturnia kanye nalezo zaseSan Casciano ai Bagni. Siyimizuzu eyi-10 ukusuka emithambekeni yokushushuluza ebusika enikezela ngamakheshi amabili ezihlalo kanye namakheshi ahlukahlukene. Ipulazi lizungezwe ngokuphelele uhlaza, ngamasimu, uphayini kanye nezinkuni ze-chestnut. Izinyamazane izinyamazane, izinkumbi, izimbila, izingulube zasendle nezimpungushe zivame ukubonakala. Le ndawo ayikanakele lutho, isiphephelo sezinhlobo zezinyoni ezehlukene okuhlanganisa oklebe namaqili. Futhi izinkulungwane zokhanyikhanyi ezizobonwa ekushoneni kwelanga ehlobo, kanye noswebezane lezimvemvane entwasahlobo. Ilungele ukubuka izinyoni, ukuhamba ngezinyawo kanye nabathandi bamabhayisikili basezintabeni, kuyilapho kungekude ukwazi ukuzijwayeza i-paragliding. Ngenxa yendawo yayo, ilungele ukuhlela ukuvakasha kwezithombe kanye nezithombe zakho zobuciko. Izifundo ze-Yoga nazo zingahlelwa
4.79 · 114 okushiwo abanye
Itholakala endaweni enqamulayo lapho kuhlangana khona i-Maremma ne-Val D'Orcia Nature Park, iMount Amiata iyintaba-mlilo yasendulo (1774 m.) enendathane yamanzi angaphansi komhlaba neziphethu ezishisayo. . Ibhavu elishisayo eliseduze kakhulu (imizuzu engu-20 ngemoto) liseSan Filippo; endaweni kunamabhavu ashisayo e-Bagni Vignone noma e-San Casciano kuze kufike kulawo asePetriolo naseSaturnia.
Hhayi kude ngasohlangothini lolwandle i-Argento coast(ihora elilodwa ngemoto) .
Imithambeka yokushushuluza icishe ibe yimizuzu eyi-10 ngemoto usuka epulazini: ebusika kunamakhilomitha amaningana emithambeka efakwe amakheshi amabili ezihlalo kanye nokushushuluza eqhweni.
I-Mount Amiata ibilokhu iyimpambano yemisebenzi engokomoya ejulile ngenxa yamasonto ayo kanye ne-Via Francigena (kusukela kuhambo lwe-pilgrim lwekhulu le-VIII oluvela enyakatho ye-Europe) oluyizungeza enyakatho. Ekuqaleni kwekhulu le-19 labona ukwanda komphakathi kaDavid Lazzaretti wenhlalakahle-yamaKristu eNtabeni iLabro. Okwamanje kuyikhaya leMerigar, isihlalo soMphakathi waseDzogchen, esinye sezikhungo ezinkulu zamaBuddha zaseTibet e-Italy.
Endaweni yaseSeggiano nasePescina ungavakashela i-Spoerri Garden, imnyuziyamu yesimanje yobuciko yamazwe ngamazwe kaDaniel, imnyuziyamu yobuciko besimanje eyakhiwe nguDaniel Spoerri eheha izethameli zomhlaba wonke.
Ukusuka e-Santa Fiora nase-Arcidosso kuya e-Pienza nase-Montepulciano kunokulandelana kwamadolobhana enkathi ephakathi namadolobha e-Renaissance ukuvakashela kanye nemisebenzi eminingi yasendaweni kunoma iyiphi isizini.